Khudradda | January 2020
Karinta Bonduel ee Guriga: Sidee iyo Intee Ayuu Ku Jiraa Korneyga Cob Cook?
Hadab la kariyey. Laga soo bilaabo erayadani qalbigayga waxay noqotaa mid diirran oo farxad leh, sida carruurnimada, markii dad badani joogi jireen xagaaga tuulada waxaana la cunay farxad habboon oo loo kariyay awoowga ayeeyo. Oo waxaad ku rushaysaa milixda, xusuusnow? Wakhtiga awoowe-u-guurka way dhaafsadeen, lamana shaqeynin guri kasta oo guri-yaqaan kasta ogyahay sida loo karsado, haynta qalabka waxtarka leh, jilicsanaanta iyo casriyeynta.
Ku saabsan faa'idooyinka iyo hababka wax loo karsado dalagga jaalaha ah. Waa maxay saladhka delicious la samayn karaa hadhuudhka, oo ay ku jiraan qasacad?
Corn waa badar ahaan laga soo bilaabo Mexico. Qaar ka mid ah qabaa'ilku waxay caabudeen iyada iyo qurux badneyd beerteeda. Waxaan leenahay hadhuudh la yidhaahdo boqoradda berrinka. Marka aad cunto karisid, waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan sababtoo ah sifooyinka faa'iido leh, iswaafajinta wanaagsan leh maaddooyinka kale, qiimaha nafaqada iyo dheefshiidka sarreysa.
Sidee iyo intee in le'eg oo loo kariyo warshad diirran oo ku taala Bonduel kala duwan?
Macaamilka hadda la jabiyay wuxuu leeyahay xulasho weyn oo firiley ah. Rugaha suuqyada iyo dukaamada waxaad ka heli kartaa wax kasta oo aad jeceshahay wadnahaaga: diiriyaasha heerarka kala duwan ee qaangaadhka ah iyo nooc kasta oo noocyo ah, hadhuudhka qasacadaysan iyo la kariyey, iyo sidoo kale alaabooyin badan oo laga sameeyay maadada.
Siyaabaha ugu fiican ee loo keydiyo dabacasaha xilliga qaboobaha iyo sida loo qodo oo loogu diyaariyo khudaarta
Xilliga qaboobaha, waxaad dooneysaa inaad naftaada ku nasto khudaar cusub oo dhadhan fiican leh. Karootada macaan oo casri ah waxaa jecel dadka waaweyn iyo carruurta. Khudradda cagaaran ee dabiiciga ah ayaa hodan ku ah fiitamiinada iyo macdanta, iyo xilliga jiilaalka, marka jirkeenu ka maqan nafaqooyinka, cunidda karootada cusub ma aha oo kaliya dhadhan fiican, laakiin sidoo kale caafimaad leh. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sida loo keydiyo karootada ee maqaalkeenna.
Baardhayaha Talooyin: Waxaan kar karaa karootada ka hor inta aan la dhigin kaydinta?
Karootada waa mid ka mid ah khudradda ugu caansan ee miiska. Waxaa ku jira fitamiino badan, macdan iyo antioxidants. Si looga faa'iidaysto karootada, ma aha oo keliya xagaaga, laakiin sidoo kale xilliga qaboobaha, waxaa lagu kaydiyaa kaydinta. Kaydinta dabacasaha xilliga jiilaalka aad ayey uga adag tahay khudaarta cagaaran. Sidaa darteed, ka feker qorshaha hore, guga, markaad dooranaysid abuurka ku haboon beeritaanka.
Hadhaayad la kariyey waa mid ka mid ah cunnooyinka jecel ee carruurta iyo xataa dadka waaweyn. Laakiin waxaa si gaar ah u qabatimay marxaladda bislaanshaha caan ah. Waxyeelkan udgoon iyo midho fiican leh ma aha mid fudud oo loo diyaariyo, laakiin sidoo kale waxaa ku jira walxo badan oo waxtar u leh jirka. Si aad u ilaaliso dhamaan hantidooda, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado sida si sax ah loo doorto iyo intee in le'eg cunto karinta.
Sidee iyo intee in le'eg cunto kariyaal ah mashiinka cadaadiska: talooyin waxtar leh
Mashiinka cadaadiska waa mid ka mid ah qalabka jikada ee ugu waxtarka leh ee aqal kasta oo u baahan. Iyada oo ay sabab u tahay daboolka hermetic, cadaadis kordhay ayaa la sameeyay, heerkulka gudaha heerkuna aad ayuu u sarreeyaa. Sidaa darteed, waxaad ku karsan kartaa noocyo kala duwan oo suxuunta ah marar badan dhakhso. Inta badan, waxay ku jirtaa mashiinka cadaadiska ah ee la kariyey.
Miyuu suurtagal yahay iyo sida loo ilaaliyo karootada beerta ilaa guga: talaabo tallaabo tallaabo tallaabo ah, talooyin ku saabsan doorashada kala duwan
Karootada waa dalagga khudradda ah ee dhirta leh, mana aha mid adagtahay in la koro dalag, maadaama ay tahay in la ilaaliyo ilaa guga. Habka waqtiga-la-baaray ee keydinta khudaarta cagaaran ee beerta ayaa leh tiro muuqaal ah. Waa maxay waxyaabaha gaarka ah ee farsamada? Wax badan ayaan ku baranaynaa maqaalkeena. Qaababka asaasiga ah, muhiim u ah kaydinta xilliga qaboobaha Karootada waxaa lagu daraa kooxda dalagyada xididada leh nudaha peridermal dusha sare ah (diirka).
Liistada siyaabaha waxtarka leh ee loo keydiyo dabacasaha xilliga qaboobaha ee guriga, haddii aanay jirin maqnaansho
Karootada - waa mid ka mid ah khudaarta ugu caansan, oo leh ujeedo guud. Waxaad u isticmaali kartaa foomka cusub ee qasacadaysan, iyo sidoo kale lagu keydiyay guga. Inta badan, khudradda asalka ah ayaa lagu kaydiyaa maqaasiinka, laakiin dhammaan guryaha ma bixiyaan. Tani ma aha sabab ay uga tagaan beergooyska, sida aad u badbaadin karto muuqaalkeeda iyo dhadhanka adoo adeegsanaya siyaabo kale oo wax ku ool ah.
Cunto karis ah! Sidee loo kariyaa hadhuudhka Polaris-ka ah?
Iyada oo ay soo ifbaxday mashiinka qafiifka ah - qalab lagama maarmaan ah oo loogu talagalay hooyooyinka intooda badan - cuntooyin kala duwan oo loogu talagalay diyaarinta cuntooyinka la yaqaan iyo kuwa aan caadi ahayn waxay bilaabeen inay muuqdaan. Xitaa hadhuudhku hadda waa la kariyaa dheriga muusikada - waxay soo baxdaa jilicsan oo udgoon. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa sifooyinka wax lagu kariyo hadhuudhka mashiinka qafiifka ah isla markaana si faahfaahsan u qeexo habka wax loo kariyo oo dhan.
Sida loo habboon yahay iyo mudada ay muhiimka u tahay in lagu karkariyo hadhuudhka digsi oo aan lahayn cobs: raashinka iyo talooyin
Corn waa nooc saxa ah carruurta iyo dadka waaweyn. Miiraha si habboon loo kariyey waa jilicsan, casiir leh, oo aan dhadhanayn. Sidee loo kariyaa hadhuudhka, on the cob ama ma? Karkari hadhuudhka duufaanku wuxuu noqon karaa meel la'aan. Waxaa jira tiro badan oo cuntooyin ah oo ku qanciya rabitaanka qof kasta.
Sidee dhadhan fiican leh oo si habboon u kariya hadhuudhka Panasonic?
Corn ayaa ku jirta kaalinta saddexaad ee caanaha ka dib qamadiga iyo bariiska. Tani ma aha mid la yaab leh, sababtoo ah badeecada ayaa hodan ku ah qayb ka mid ah fiitamiinada iyo macdanta oo loo baahan yahay nolosha buuxda. Dadka waaweyn iyo carruurta adduunka oo idil waxay jecel yihiin raaxeysigan. Ka sokow faa'iidooyinka weyn, hadhuudhku sidoo kale waa mid aad u dhadhan fiican. Si ay boqoradda this ee beeraha si ay u noqdaan saxan qoys qoyska, waxaa si ku filan si fiican loo kariyey.
Corn waa loo yaqaan dadka ilaa 10 kun oo sano, waxaa jecel yahay quruumo badan, waxaa lagu daraa nooc kasta oo suxuunta ah oo la cuno sida oo kale. Corn waa lagu qurxiyey dhadhanka iyo guryaha caafimaadkaba, marka, marka xagaaga ee gees walba waxay bilaabaan inay iibiyaan cobs, way adag tahay in laga hortago in aan la iibsan oo aan la dhadhamin hadhuudh la kariyey.
Carrot waa dalag khudradda ka mid ah oo ka mid ah kuwa ugu yar ee ku habboon kaydinta muddada dheer. Si aad tan u sameyso, waxaad codsan kartaa hababka kala duwan, doorashada taas oo lagu go'aamiyey rabitaanka shakhsiyeed ee xagaaga deggan, dhismaha la heli karo iyo noocyada kala duwan ee dalagga. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in la abuuro shuruudo buuxa oo loogu talagalay ilaalinta soo bandhigida dabacasaha, oo ay ka mid tahay habka heerkulka saxda ah waa muhiim.
Ma ogtahay sida ugu dhakhsaha badan u kariyo hadhuudhka microwave ee baakadka? Waan kuu sheegi doonaa!
Qof kastaa wuu ogyahay baahida loo qabo inuu cuno khudaarta inta badan ee suurtogalka ah. Waxay hodan ku yihiin fitamiinada, fibreerka, iyo walxaha raadraaca. Haddii qofku uu sameyn karo hilib iyo xayawaan xoolo leh qorshe macquul ah oo uu cuno, markaas la'aanta khudaarta ku jirta maqaarka ayaa waxyeelo gaarsiin karta jirka.
Xeerarka fudud: goorta la bilaabayo karootada goosashada iyo xididadaha iyo sida loo kaydiyo xilliga jiilaalka?
Karootada iyo xididdo waxay leeyihiin waqti dheer waxayna si adag u qaateen meelahooda miiska. Iyaga oo aan lahayn, ma suurtageli karto in la qadariyo miiska xafladaha oo caan ah oo caan ah oo hoosta ku jira oo dhar ah, ama maalmo wiig ah oo leh maraq beetroot ama vinaigrette. Qawaaniinta xeerarku waa kala badh uun dagaalka. Qeybta labaad waa in la ilaaliyo wax kasta oo amaan ah iyo dhawaqa ilaa goynta soo socota.
Cunnooyinka ugu fiican ee loogu talagalay karinta hadhuudhka microwave ee guriga
Corn waa badeeco dabiici ah oo la jecel yahay oo si dhaqso ah loo diyaarin karo iyadoo aan la isticmaalin dheriyada, biyaha iyo qalabka kale. Miro, miro la jarjaray ayaa la helaa kaddib marka la kariyo microwave. Alaabtaasi waa la cuni karaa sida saxan dhinaca ama sida saxan madax banaan.
Dalagyada beerta kale, karootada waxay u taagan yihiin sida khudradda oo ay adag tahay in la ilaaliyo wakhti dheer. Waxaa jiri kara sababo badan oo jiilaalka saboolka ah ee dalagga geedka: laga bilaabo farsamooyinka beeraha ee aan habooneyn ee beerista ilaa qoyaan badan ee Maqsin. Qaybta qasabka ah ee tiknoolajiyada kasta ee karootiga kaydinta - miraha ka horreeya dhoobo.
Dhammaan wixii ku saabsan sida loo ilaaliyo hadhuudhka guriga ee xilliga qaboobaha: cuntada ugu fiican
Aqoonsiga ugu horreeya ee dadka leh hadhuudhku waxay qaadatay qarniyo badan ka hor, tan iyo markaasna alaabtan waxay noqotey qayb ka mid ah waxyaabo badan oo khudrado culus ah. Canning waa mid ka mid ah fursadaha karinta ugu caansan ee badeecada, iyo maanta waxaad ku dari kartaa xoogaa dheeraad ah bangiga karinta. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa sida loo ilaaliyo hadhuudhka guriga ee xilliga qaboobaha, waxaan ku qeexaynaa cuntada ugu fiican ee karinta.
Sida loo qallajiyo karootada foornada, iyada oo badbaadineysa fitamiinada?
Karootada waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caamsan ee suxuunta. Waxaa lagu daraa suunka koowaad iyo kan labaad, keega, diyaariyo saladh iyo casiir. Laakiin dalagga xididku waa mid furfuran oo ku saabsan xajinta. Si uu ugu raaxaysto dhadhankiisa oo loo hayo muddo dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo xaalado dhowr ah - laga bilaabo xulashada noocyo ku habboon "sariir" dheer si loo diyaariyo qolka taas oo khudradda "overwinter".